वर्षको पहिलो कारोबार दिन नेप्से हरियो - Naya Patrika
वर्षको पहिलो कारोबार दिन नेप्से हरियो
२०७५ सालको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक हरियो भएको छ । बजार खुलेको केही समयपछि नै ओरालो लाग्न थालेको नेप्से कारोबारको एक घन्टा अवधिपछि बढ्न थालेको थियो । त्यसपछिको समयमा करिब स्थिर रहेको नेप्से, अन्तिम एक घन्टामा बढेको थियो ।
यस दिन नेप्से परिसूचक २ दशमलव ६० अंक बढेर १ हजार दुई सय ८० दशमलव १५ बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस वर्षको पहिलो कारोबार दिनदेखि धितोपत्र खरिद–बिक्रीको आदेश इन्टरनेटमार्फत दिन सक्ने व्यवस्था गर्न ब्रोकरहरूलाई २०७४ चैत ३० गते परिपत्र गरेको थियो । सोहीअनुसार यस दिन बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले सेमी अनलाइन कारोबारको औपचारिक सुरुवात गरेका छन् । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि लगानीकर्ताले घरबाटै खरिद–बिक्रीको आदेश दिन सक्ने भएका छन् । यसले लगानीकर्ताको मनोबल केही बढाएको छ ।
आइतबार नेप्से परिसूचक सामान्य बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा घटेको छ । यस दिन १ सय ५९ कम्पनीको ४ हजार १ सय ९ पटकको कारोबारमा रू. ३० करोड ६७ लाख ४७ हजार ९ सय १४ बराबरको ६ लाख ६६ हजार ७ सय ६१ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव ५३ अंक बढेर २ सय ७२ दशमलव ९८ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल बजार पुँजीकरण अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेर रू. १५ खर्ब पुगेको छ भने फ्लोट बजार पुँजीकरण पनि बढेर रू. ५ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने आरएसआई ५२ दशमलव ७२ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
कारोबारमा आएका ९ समूहमध्ये यस दिन ५ समूहको परिसूचक बढेको छ भने ४ समूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन बिमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ३६ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, होटेल समूहको परिसूचक १ दशमलव २ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत, अन्य समूहको शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत र विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बढेको छ । जलविद्युत् समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक समूहको शून्य दशमलव २ प्रतिशत र उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत घटेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अगाडि रहेको छ । यस दिन सो कम्पनीको रू. १ करोड ४२ लाखभन्दा बढीको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । सेयर संख्याका आधारमा यस दिन जनता बैंक नेपाल लिमिटेड अगाडि रहेको छ भने कारोबार संख्याका आधारमा प्रिमियर इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । यस दिन जनता बैंकको ३२ हजार ३ सय १९ कित्ता र प्रिमियरको ३ सय ३ पटक सेयर किनबेच भएको छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य यस दिन ६ दशमलव ७८ प्रतिशत बढेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयरको मूल्य यस दिन करिब १० प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ५९ कम्पनीमध्ये ८३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ६३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बाँकी १३ कम्पनीको सेयर मूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
प्राइमको १ः१.६ हकप्रद निष्कासन बन्द
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले २०७४ फागुन २७ गतेदेखि १ बराबर १ दशमलव ६ अनुपातमा निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने म्याद वैशाख २ गते सकिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १०० अंकित मूल्यका ९७ लाख ६३ हजार २ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६९ करोड २ लाख रहेको छ । हकप्रद सेयर बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी रू. १ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख २० हजार पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि कम्पनीको सेयरदर्ता पुस्तिका फागुन १७ गते बन्द गरेको थियो ।
फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफा ७ करोड ३० लाख
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सले ७ करोड ३० लाख ९७ हजार खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी हो । सञ्चालन मुनाफा र खुद ब्याज आम्दानी बढेपछि कम्पनीको नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
सो अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ सय १४ दशमलव ६१ प्रतिशत वृद्धि भएर रू. ५६ करोड ७७ लाख ८५ हजार पुगेको छ भने जगेडा कोष रू. १४ करोड ४४ लाख ७६ हजार रहेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी २६ दशमलव ४७ र सञ्चालन मुनाफा २६ दशमलव ७१ बढेको छ । कम्पनीको कर्जा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १५ दशमलव २९ प्रतिशत बढेर रू. ३ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी रु १४ दशमलव २४ रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ रु. १ सय २५ दशमलव ४५ रहेको छ । साथै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ३६ दशमलव ५३ गुणा रहेको छ ।
एसियनको २ः१ हकप्रद निष्कासन बन्द
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले फागुन २७ गतेदेखि २ बराबर १ अनुपातमा निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने म्याद वैशाख २ गते सकिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १०० अंकित मूल्यका ४० लाख २७ हजार ९ सय ६६ दशमलव २० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।